Istanbul hatrany Malabo izao ao amin'ny Turkish Airlines
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Istanbul hatrany Malabo izao ao amin'ny Turkish Airlines
Istanbul dia mampifandray an'i Malabo, renivohitr'i Guinea Equatoriale ho 319th toeran-kaleha. Izy io dia hanome alàlana an'i Guinea Ekoatorialy avy any Eropa, Amerika Avaratra, Azia ary Aostralia. Fotoana tsara hanitarana ny dia sy fizahan-tany mankany amin'ity firenena Afrika Andrefana ity.
Amin'ny taona 60th toeran'ilay mpitatitra manerantany ao amin'ny kaontinanta Africa, ny sidina mankany Malabo dia hiasa amin'ny zotra Istanbul - Port Harcourt - Malabo - Istanbul miaraka amin'ny fiaramanidina Boeing 737-900.
Amin'ny zotra vaovao, Filohan'ny Birao Tiorka ao amin'ny Birao sy ny Komity Mpanatanteraka, M. İlker Aycı Hoy, “Nisy vanim-potoana vaovao natomboka tao amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina sy fizahantany Tiorka miaraka amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul. Ny foibem-piasanay vaovao sy nohatsaraina dia manome tombony fahombiazana tsy manam-paharoa raha manatsara ny tambajotran-tsidinay. Androany, mifanaraka amin'ny paikadim-pitomboana mitohy, dia faly izahay milaza fa miampy ny Malabo amin'ny tambajotram-sidina maharitra an'ny Turkish Airlines. Manomboka amin'ity andro ity, ny mpandeha mandeha mankany Malabo dia afaka mankafy ny fampiononana sy ny fandraisam-bahiny an'ny Turkish Airlines. Mino tanteraka izahay fa ny làlanay vaovao dia hanatsara kokoa ny fifandraisana eo amin'i Torkia sy i Guinea Equatoriale amin'ny faritra rehetra. ”
Malabo, renivohitr'i Guinea Equatoriale, no tanàna faharoa lehibe indrindra amin'ny firenena. Ankoatry ny maha-tanàna manankarena solika azy dia izy ihany koa no lohalaharana amin'ny hetsika fizahan-tany. Miaraka amin'ny zava-mahatalanjona voajanahariny, ny mahandro sakafo eran-tany sy ny maritrano ara-tantara, Malabo dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra eto Afrika.
Birao fizahantany afrikanina aNidera ny Turkish Airlines noho ny fifandraisana vaovao.
Miarahaba ireo vahiny voalohany ny Gallery Jetwing Kandy Gallery
Divay mamy any Aostralia